अफसोचको आठौँ श्रृङखला
२०७६ मंसिर २४
नेपाली समाजका विभिन्न समसामयिक विषयबस्तुलाई आधार बनाएर निमार्ण गरिएको लधु चलचित्र अफसोच को आठौ श्रृङखला युटुव मार्फत सार्वजनिक भएको छ । राजनैतिक तथा समसामयिक विचार र कथाबस्तुलाई लघु चलचित्रमा समावेश गरिएको छ । नेपाली बजारमा अत्याधिक मुल्य बृद्धि भएको प्याजको विषयलाई मुख्य रुपमा आधार बनाएर निकै रमाइलो पारामा विषयबस्तु बनाएर चलचित्र निमार्ण गरिएको छ । पदम बोहराको छायाँकन तथा दिप श्रीपालीको निर्देशन चलचित्रमा रहेको छ ।
चौंथो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड(२०१९ कार्यक्रम सान फ्रन्सिस्कोमा भब्यताको साथ सम्पन्न
२०७६ मंसिर १७
चौथो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड कार्यक्रम ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड एलएलसी, नेपाल फिल्म सोसाइटी र गोल्डेन स्टेट मुभी मेकर एलएलसीको आयोजना तथा ८८४८ मिडिया हाउस एलएलसी, हिमालयन फाउन्डेसन कर्पको सह आयोजनामा सान फ्रन्सिस्को बे एरियामा भब्यताका सम्पन्न भएको छ। नेपाली चलचित्र जगतमा ख्याती आर्जन गरेका सुप्रसिद्द कलाकार र सर्जकहरुको सम्मानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा १०० भन्दा बढी कलाकार र १००० को हाराहरीमा दर्शकहरुको सहभागीताले हल भरिएको थियो।
गायक प्रमोदको ‘आज फेरि’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
२०७६ मंसिर १४
गायक प्रमोद प्रसाईको ‘आज फेरि’ नामको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । नेपाली फिल्ममा समेत आवाज दिएका उनले पहिलो आधुनिक गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गायिका आस्था राउतको दोस्रो एल्बम ‘आधार भाग २’ सार्वजनिक भएको छ । एल्बमलाई बिहीबार राजधानीमा मह जोडी (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य)संगीतकार सुरेश अधिकारी, गायक राजु लामा, आस्थाका बाबु तथा लोकगायक हरिबहादुर राउत र आमा सावित्री राउतलगायतले एल्बम सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा हास्य कलाकार हरिवंशले आस्थासँग आफूले फिल्म ‘छक्का पन्जा २’ गीत ‘झ्याम्म झ्याम्म।।।’ मा सहकार्य गर्न पाएको सम्झिँदै आस्थाको स्वर भिन्न रहेको दाबी गरे ।
सिंगापुरमा मा चार नेपाली सम्मानित
सिंगापुरमा सम्पन्न भएको छैठौ अन्तराष्ट्रिय गोल्डेन ब्राण्ड अवार्ड २०१९ मा चार नेपाली सम्मानित भएका छन् । विभिन्न ३० राष्ट्र आएको २५ विधा बाट करिब ४०० वटा नोमिनेसनमा नेपालको तर्फ बाट २ जना पुरुष र २ जना महिला छनौट भएका थिए । जसमा चर्चित अन्तराष्ट्रिय कोरियोग्राफर आस्विनी कान्त झा र चर्चित तथा सफल पेजेण्ट डाइरेक्टर निशु कान्त झालाइ एक भब्य समारोह बीच प्रमुख अतिथि इन्डोनेसियाका राजा अरिया पकु आलम अल हज द्वारा सम्मान गरिएको थियो ।
नेशनल पावर न्यूज म्यूजिक अवार्डको लागी फारम खुल्यो
पावर ईन्टरनेशनल मिडिया नेपाल (पिम ननेपाल)को आयोजनामा सम्पन्न हुन गैरहेको नेपालको पहिलो समावेशी म्यूजिक अवार्ड नेशनल पावर न्यूज म्यूजिक अवार्डको तेश्रो संस्करण २०२० को लागी फारम २०७६ मंसीर १ गते देखी खुल्ला गरिएको आयोजक संस्थाले जानकारी गराएको छ । नेपाली चलनचल्तीका भाषा सहित नेपालका वोलिने विभिन्न राष्ट्रिय भाषाका गीतहरुको सहभागितामा सम्पन्न हुने कार्यक्रमलाई नेपाली कलाकारहरुले उत्सवको रुपमा लिने गरेका छन ।
गायक कृष्ण केसीको मातृभुमि प्रति समर्पित गीत “गोर्खालीको शान “
नेपाली गीत संगीतहरुमा मातृभुमी प्रति समर्पित गीत कम मात्रामा आइरहेको अवस्थामा देश प्रति समर्पित गीत “गोर्खालीको शान “को भिडिया सार्वजनिक भएको छ । गोखार्ली ले गरेको योग्दान र पुर्खाले गरेको बलिदान बाट बनेको विशाल नेपालको गरिमालाई उच्च मुल्याङकन गर्दैँ गीतमा देश प्रतिको मायालाई समेटिएको छ । सार्वजनिक गीतमा गायक कृष्ण के सी र गायिका सोनु घिसिङको आवाजमा रहेको गीत बजारमा आए सगैँ चर्चाको शिखरमा रहेको छ । सुवास जिसीको शब्द तथा कृष्ण केसीको संगीतमा तयार पारिएको
सीमाबारे गीत रन्किँदा राज्यको कानमा आवाज किन घन्किँदैन ?
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले नेपाली मन मुटु दुखेको अवस्था छ । पश्चिम कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र अहिले भारतले आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि सबै नेपाली मनहरूको ध्यान त्यतातिर तानिएको अवस्था छ । यस विषयमा विगत २ सातादेखि नेपाली सञ्चार जगत समाचारमय भएका छन् । तर, यसको समस्या समाधमनका पक्षमा कुनै पक्षबाट सकारात्मक पहल भएको देखिँदैन । नेपाल एउटा दुई ढुुङ्गाबीच रहेको तरुलको रूपमा रहेको छ । यस देशले बेला–बेलामा यी दुईवटा ठूला देशहरूको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको सामना गर्नु परिरहन्छ ।
प्रेमराजा महतको नयाँ स्वदेश गान ‘आयो नेपाली’ सार्वजनिक हुँदै
नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल रहेका गायक प्रेमराजा महतले यस बेला आफ्नो नयाँ स्वदेश गान ‘आयो नेपाली’ लिएर आएका छन् । पानको पात, सिमसिमे पानीमा, बाँझो खेतमा, ओरालीमा को झ-योलगायतका सयौँ गीतका गायक अहिले धेरै समयपछि फेरि आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय भावनाले भरिएको गीत ‘आयो नेपाली’ लिएर आउने तयारीमा जुटेका छन् ।
फिल्म ‘१२ सत्ताइस’ को ट्रेलर सार्वजनिक
२०७६ कार्तिक २८
फिल्म ‘१२ सत्ताइस’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार राजधानीस्थित बिग मुभिजमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । लाइट कमेडी जनरामा निर्माण भएको फिल्म आउँदो मंसिरको २७ गतेबाट अलनेपाल सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँने छ ।सार्वजनिक ट्रेलरमा पैसा कमाउनको लागि १२ सत्ताइस गर्ने कथा देखाउँन खोजिएको छ । जोन योञ्जनले निर्देशित फिल्ममा समिर श्रेष्ठ, अभिषेक नेपाल, काजी राना, अस्मिता लामिछाने, सम्राट थापा, अभोन राज लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
आशा लामाको स्वरमा चुरा पोते
विगत लामो समय देखि नेपाली साँगीतक क्षेत्रमा सक्रिय गायीका आशा लामा को स्वरमा सजिएको नयाँ म्युजिक भिडियो चुरा पोते सार्वजनिक भएको छ । रसियन कल्चर सेन्टरमा भएको राष्ट्रिय दृष्टिबिहिन टेबल टेनिस संघको सहयोगार्थ गरिएको डि.ए.आर साँस्कृतिक साँझ कार्यक्रममा वरिष्ठ संगितकार दिपक जंगमले गीत बिमोचन गरेको हो ।
गायक मदन ढकालको आवाजमा ”भिरको चिउरी ”
नेपाली लोक गीत सगीतमा मौलिक भाकामा आधारित गीतहरु बजारमा निरन्तर आइरहेको अवस्थामा गायक मदन ढकाल र गायिका मन कुमारी मगरको आवाजमा ”भिरको चिउरी ” गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । युगल जोडीको प्रेमका भावहरुलाई गीतमा समेटिएको छ। गीतमा प्रेमका भावहरुलाई निकै मार्मिक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। मदन ढकालको मौलिक शब्द सिर्जना तथा लय सिर्जनामा गीत तयार गरिएको छ।
तिहार गीत ‘मखमली’
डिएआर मुभिजले नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहारको अवसर पारेर तिहार गीत ‘मखमली’ आम स्रोता तथा दर्शक माझ ल्याएको छ । प्रभावन जे को शब्द, संगीत रहेको गीतमा स्वर स्वंम प्रभावन जे, चर्चित लोक गाएक सरोज लामिछाने र सपना गुरुङले साथ दिएकि छन् । गीतको एरेन्ज जिवन वडु र मिक्सिङ मनोज डंगोलले गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा कलाकार रमा थपलिया, सरिता लामिछाने, रामशरण जंगम, सरोज दाहाल, र विवेक चौलागाईको अभिनय रहेको छ ।
लोकप्रिय गीतकार बी. पाण्डेको नयाँ गीत सार्वजनिक
२०७६ कार्तिक १
चर्चित गायक प्रमोद खरेलका स्वर रहेको लोकप्रिय गीतकार बी. पाण्डेको नयाँ गीत 'पहिले दिल' गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यस गितमा ऋषि खड्काको संगित रहेको छ । बी. पाण्डेका रचनामा सार्वजनिक भएका गीतहरु लोकप्रिय रहेका छन् । शंका नगर, बन्की चरि जस्ता सयौंका चर्चित गीतका रचनाकार पाण्डे विभिन्न अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् ।
गजेन्द्र लिम्वुको आवाजमा “ शुभ कामना “गीतको भिडियो सार्वजनिक
२०७६ असोज ३०
प्रसाद डिजिटल म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतीमा गायिका सुनिता थेगिम र गायक गजेन्द्र लिम्वुको आवाजमा “ शुभ कामना “गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मौलिक पनमा आधारित रहेको गीतमा नेपालीहरुको महान पर्व हरितालिका पर्वले आपसी रुपमा सदभाव र भातृत्वको भावना जागृत रहोस भन्ने कामना गीतमा रहको छ ।
‘आमाको सपना पूरा गर्न कलाकारितामा लागेँ’
नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा लाग्नेहरूको अहिले भीड नै लागेको छ । यस क्षेत्रको व्यावसायिक अवस्था राम्रो नभएता पनि यस क्षेत्रप्रति आकर्षित हुने शुभचिन्तक कलाकारहरूको भने लहड नै चलेको छ । वास्तवमा नेपाली गीतसङ्गीतबाट आम्दानी नहुँदा नहुँदै कसरी धानिएको छ त नेपाली लोकदोहारी क्षेत्र ? यस क्षेत्रमा लगानी कहाँबाट कसरी जुट्ने गर्दछ त ?
२०७६ असोज ९
‘बेवारिसे लाशलाई लुछिलुछी खाँन्छन् गिद्धहरुले, तर मेरो लास बेवारिसे होइन, मेरो आमा छिन् र बा पनि’, काठमाडौँको अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरको प्रेक्षालयमा आवाज गुञ्जिन्छ । चकमन्न थिएटरको अँध्यारो कोठामा भरिभराउ दर्शकको मन सिरिङ्ग पार्नेगरी आएको दृश्यसहितको आवजलेनै बोलिरहेको थियो कारुणिक कथा । सन् १९३१ मा भारतको मध्यप्रदेशमा जन्मेकी मन्नु भण्डारीले सन् १९७९ मा लेखेको उपन्यास हो ‘महाभोज’ ।
भाइरल बालिका साईलीन श्रेष्ठको 'आँखी झ्यालैमा'
नेपाली पार्श्व गायनकी अत्यतै लोकप्रिय गायिका देविका बन्दनाको नयाँ गीत “आँखी झ्यालैमा”को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ख्याल ख्यालमा माया बसेको कुरा गरिएको उक्त गीतमा देविकाको साथमा गायक राजेश मर्हजनको पनि स्वर रहेको छ। गीतमा शान्तिप्रियको शब्द र सन्तोष श्रेष्ठको संगीत रहेको छ भने राजन इशानको एरेन्ज रहेको छ । भिडियोमा सागर लम्साल 'बले' , राशी क्षेत्री, र भाइरल बालिका साईलीन श्रेष्ठको नृत्य तथा अभिनय रहेको छ ।
अविनाश थापा मगरले ल्याए नयाँ कौडा गीत 'खैँचडीको तालैमा'
२०७६ भदौ ३१
मगर तथा गुरुङ समाजमाविशेषगरी गोरखा, लमजुङ, तनहुँ लगायत अन्य नेपालको पश्चिम क्षेत्रमानिकै नै लोकप्रियमानिने कौडा गीत सार्वजनिक भएको छ ।